Daawo Sawirada sida Garowe loogu soo dhaweeyay madaxwayne Xassan Sh. Maxamuud. – Radio Daljir
Abriil 28, 2013 5:34 b 0
Garowe, April, 28, 2013 – Waxaa magaalada Garowe ee xarunta dawladda Puntland maantay si heer sare ah loogu soo dhaweeyay madaxwayne Xassan Shiikh Maxamuud iyo wafti uu hoggaaminayo.
Wafdiga madaxwayne Xassan Shiikh ayaa isugu dhafnaa xubo ka tirsan golaha wasiirada, baarlamaanka, iyo saraakiil ciidan, waxaana wasiiradii safarkiisa ku wehliyay ka mid ahaa wasiirka maaliyada iyo qorshaynta Soomaaliya Maxamuud Xassan Sulaymaan iyo wasiiru-dawlaha madaxtooyada Soomaaliya Faarax Shiikh C/qaadir Maxamed.
Ma jirin wax ilaalo ciidan AMISOM ah oo ku wehliyay safarka madaxwayne Xassan Shiikh, waxaana aad loo adkeeyay guud ahaanba ammaanka magaalada Garowe, iyadooba la joojiyay isticmaalka laamiga ee qaybaha bulshada iyo gawaarida, arrintaasi oo hakad saacado badan galisay dhaq-dhaqaaqa ganacsiga magaalada Garowe.
Madaxwayne Xassan Shiikh ayaa loo kalbiyay qasriga madaxtooyada Puntland ee Garowe, waxaana uu kulan gaar ah la qaadan-doonaa madaxwaynaha Puntland C/raxmaan Shiikh Maxamed Maxamuud ?Faroole?, iyadoo la filaayo in kulankaasi kaddib ay labada mas?uul wadaqaban-doonaan shirjaraa?id oo ay uga hadli doonaan waxyaabihii kasoo baxay kulankoodii.
Safarka madaxwayne Xassan Shiikh ayaa ahaa mid aan horay loo shaacin, waxaana safarkaan uu noqonayaa kii ugu horeeyay oo uu kusoo gaaro deegaannada Puntland tan iyo markoo loo doortay hoggaamiyaha Soomaaliya batamihii sanadkii hore ee 2012-ka.